Faah faahinta Dagaalo xoogan oo Maanta ka dhacay Gobolka Gedo – SBC
Faah faahinta Dagaalo xoogan oo Maanta ka dhacay Gobolka Gedo
Posted by Webmaster on January 6, 2013 Comments
Dad kor u dhaafaya 15 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ayaa ku geeriyooday dagaal maanta ka dhacay Deegaan 20Km u jira Magaalada Garbahaarey xarunta gobolkaasi Gedo.
Dagaalkan oo ahaa mid xoogan islamarkaana u dhexeeyay ciidamada Dowlada Somalia iyo kuw Itoobiyaanka ah ee kusugan gobolkaasi iyo xoogaga xarakada Alshabaab ayaa waxa uu ka dhacay Tuulada Meykarebay oo dhinaca waqoyi kaga began Garbaharey.
Dad goob joogayaal ah oo warbaahinta wareysi siiyay ayaa sheegay in intii uu socday dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ayna maqlayeen Qoryaha lidka diyaaradaha iyo Bmka oo la isla dhacayay waa sida ay hadalka u dhigeene.
Dhamaan dadka ku waxyeeloobay oo la rumeysan yahay in ay ka badan yihiin 30 qof oo 15 dad ka badani ay dhinteen ayaa waxaa ay isugu jiraan dhinacyada dagaalamay maadaama goobaha lagu dagaalamay ay ahaayeen deegaano dadkii degenaa ay isaga qexeen.
Ma jiraan warar intasi dhaafsisan oo ka soo kala baxaya labada dhinac ee dagaalamaya marka laga reebo wararka ay soo warinayaan wariye yaal aaga ku sugan iyo dadweyne Goobjoogayaal ahaa.